सहिद दिवसको सान्दर्भिकता | Mechikali Daily
सहिद दिवसको सान्दर्भिकता
Posted By: Mechi Kalion: १६ माघ २०७३, आईतवार ०४:२९
आज सहिद दिवस । हरेक वर्ष माघ १६ गते सहिद दिवस मनाउने गरिन्छ । सहिद दिवसको अवसरमा आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएका छन् । देश र जनताका लागि आफ्नो ज्यानको आहुति दिनेहरुको सम्झनामा सहिद दिवस मनाउने गरिन्छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन धेरै सहिदले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएका छन् । यस्ता सहिदहरु मध्ये प्रजातन्त्र ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान दिने चार जना सहिदले शाहदात प्राप्त गरेको समयको स्मरणमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।
हरेक वर्ष १६ माघ अर्थात् सहिद दिवसको दिन विभिन्न दलका नेताहरुले सहिदका सालिकमा माल्यार्पण गर्छन् । काठमाडौंको सहिद गेटमा सरकार प्रमुखले माल्यार्पण गर्ने प्रचलन छ । सरकारले यस दिन सार्वजनिक बिदा समेत दिने गरेको छ । तर सहिदप्रति श्रद्धाभाव व्यक्त गर्ने नेताहरूको यो कर्मकाण्डीय शैलीले मात्र सहिदको सपना साकार हु“दैन । हाम्रो मुलुकमा भएका जुनसुकै आन्दोलनमा आफ्नो ज्यान गुमाएका सहिदहरुको एउटै सपना हो – समृद्ध नेपाल निर्माण । तर, अहिलेसम्म सहिदले देखेको यो सपना पूरा गराउन राजनीतिक दलहरु सफल हुन सकेका छैनन् । नया“ संविधान निर्माणस“गै दलहरु यसको सफल कार्यान्वयनमा जुटेर मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि लैजाने आशा आमनेपालीले गरेका थिए । तर, दलहरु यसमा अलमल छन् । राजनीतिक अधिकार धेरै प्राप्त भए पनि आर्थिक समृद्धि नेपाली जनताले महशुस गर्न सकेका छैनन् । सहिद दिवस मनाइ“रहदा यो विषय निकै पेचिलो बनिरहेको छ ।
सहिदको शालिकमा फुल चढाएर औपचारिक कार्यक्रम त गर्न सकिएला तर उनीहरुको सपनालाई साकार पार्न सकि“दैन । सहिद दिवसको अवसरमा दलका नेताहरुले सहिदले देखाएको बाटोमा मुलुकलाई हिंडाउने प्रण गर्नुपर्छ ।
वास्तवमा अहिले सहिद परिवारको स्थिति अत्यन्त टिठलाग्दो छ । सहिदकैं कारण दलका नेताहरु सत्तामा पुगे । तर सत्तामा पुगेपछि नेताले सहिदको सपना बिर्सिए, सहिदको परिवारलाई विर्सिए । धेरै सहिद परिवारको अवस्था अहिले पनि निकै कारुणिक छ । दलका नेताहरु आफ्नो स्वार्थमा लाग्दा वास्तविक सहिदमाथि अपमान समेत भएको छ । अहिले गाडीले हानेर मारेको, अस्पतालमा डाक्टरको लापरबाहीले मरेको वा चोरेर भाग्दै गर्दा प्रहरीको गोलीले मरेकालाई पनि सहिद घोषणाका लागि दबाब दिने गरिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले वास्तविक सहिदमाथि घोर अपमान भैरहेको छ । वास्तविक सहिदको सम्मान हुनुपर्छ । उनीहरुले देखाएको मार्गमा मुलुकलाई हिंडाउनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र सहिदप्रति हाम्रो सच्चा सम्मान हुनेछ ।
स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर
४ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०७:१५
पर्वले थप कष्ट नथपून्
३ कार्तिक २०७७, सोमबार ०७:०१
महामारीबाट जोगिएर पर्व मनाऔं
२ कार्तिक २०७७, आईतवार ०८:१३
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका चुनौती
३० आश्विन २०७७, शुक्रबार ०६:५८
शुद्दोधन गाउपालिका वडा नम्बर ४ को कार्यालय नव निर्मित वडा भवन उदघाटन
परिवर्तित पाठ्यक्रमबारे ३ दिने अभिमुखीकरण सम्पन्न
लागुऔषध सहित दुई युवक पक्राउ
कार्तिक ५ गते बुधबारको मेचीकाली दैनिक इ–पेपरमा
हथौसा लिटल स्टार स्कुलले पायो आइएसए अवार्ड
तिन किलो अफिम बरामद ! प्रहरीलाई धक्कादिदै कारोबारी फरार
नेपालमा थप ३ हजार ९३ जनामा कोरोना पुष्टि
कार्तिक ४ गते मंगलबारको मेचीकाली दैनिक इ–पेपरमा
लुम्बिनी अंचल, रुपन्देही जिल्ला, बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं.–११, मिलनचोकस्थित मेचीकाली सन्देश प्रकाशन प्रा.लि वि.सं.२०५७ सालमा मेचीकाली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको नामबाट स्थापित तपाई हाम्रो संस्थाले सफलता पुर्वक सोह्रौ वर्षमा पदार्पण गरेका छ ।
प्रधान सम्पादक/संचालक:- बसन्तराज खनाल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत:- विष्णुप्रसाद गैरे
मिलनचोक, बुटवल–११, रुपन्देही
प्रशासन/विज्ञापनः फोनः ०७१–५४६००५/५४१५२१
© 2015 , Mechikali National Daily. Powered By IGNITE